တစ်ခါတစ်ရံတွင် Mac များထိုစမတ်မဟုတ်ပါ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 28, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်နည်းပညာပညာရှင်ကိုမဆိုအင်တာနက်နှင့်အခြားမည်သည့်အသံဖိုင်ဖိုင်၏အဓိကအမျိုးအစားဖြစ်သနည်းဟုမေးပါကသူတို့ပြောရမည် MP3။ ၎င်းသည်လူသားများကြားသောအသံအရည်အသွေးကိုထိန်းသိမ်းထားသောမြင့်မားသော compressed standard တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍သာ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည် Apple (သို့မဟုတ် Microsoft) ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်၏အစီအစဉ်များအကြား MP3 ဖိုင်များကိုကူးပြောင်းမှုတစ်ခုအဖြစ်ကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။
Apple ၏ပုံမှန်ဖိုင်အမျိုးအစားမှာ ဟုတ်တယ်။ လူတိုင်းကြားဖူးသလား။ သင် Mac ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေခြင်းမရှိပါကဖြစ်နိုင်သည်။
မင်း Mac gurus အတွက်ငါခေါင်းထဲကနေထွက်နိုင်မှာပါ။ ကျွန်ုပ်မှားလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုတည့်မတ်ပေးပါ ဟုတ်တယ် MP3 ဖိုင်
ကွမ်းခြံကုန်း? Nope ။
တေးသီချင်းလား Nope ။
Quicktime Pro ကို? Nope ။
ဒါကြောင့်ငါအဘို့အအချို့သော Googling လုပ်ပါ mp3 နှင့် iTunes (သင်အခမဲ့သောဆော့ (ဖ်) ဝဲ) ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးများစွာကိုရှာဖွေပြီးဖြစ်နိုင်သည်။ ဖိုင်များကိုတင်သွင်းရန်သွင်းကုန်ချိန်ညှိချက်များကိုမီဒီယာဖိုင်အမျိုးအစားအဖြစ်သာတင်လိုက်သည်။
အေးဆေး! ဒါနဲ့ iTunes, voila ထဲကိုကျွန်တော်သွင်းလိုက်တဲ့ file ကို import လုပ်လိုက်တယ်။ Ummm ... မ voila ။
နောက်ဆုံးတော့ iTunes ထဲက sound file ကို right-click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်။MP3 သို့ပြောင်းပါ။ ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုချစ်တယ်။ ကမ္ဘာကြီးကတရားမျှတတယ် တစ်နာရီပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော့်ဖိုင်ကိုပြောင်းနိုင်ပြီ ပြီးပြီ
ငါနောက်ဆုံးမှာအထဲကကူးယူဖို့ဘယ်လိုထွက်နေသေးတယ် iTunes မှ MP3 ဖိုင်နှင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏ site ပေါ်တွင်တင်ပါ။ ကိုယ့်ကိုငါသိ၏ RIAA တစ်နည်းနည်းနဲ့ဒီနောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်သစ်အသံအပလီကေးရှင်းတိုင်းတွင် MP3 များနှင့်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ် MP3 များသို့အလိုအလျောက်တင်ပို့ခြင်းတို့အတွက်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းသောအင်္ဂါရပ်မရှိပါ။ ရယ်စရာ။
မတ်လ 28, 2007 မှာ 9: 52 pm တွင်
Mac မှာလည်း MP3 ကိုဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့အချိန်ယူရတယ်။
၎င်းဖိုင်သည်သင်၏ပုံမှန် iTunes ဂီတလမ်းညွှန်တွင်ဖြစ်သင့်သည်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့၎င်းဖိုင်ကို iTunes playlist မှသင်၏ desktop သို့မဟုတ်မည်သည့်ဖိုင်တွဲသို့မဆိုတိုက်ရိုက်ဆွဲယူရန်ဖြစ်သည်။ 😉
မတ်လ 28, 2007 မှာ 9: 54 pm တွင်
အရမ်းရယ်ရတယ် အဘယ်သူသည်ရုံဆွဲယူဖို့ thunk ကြလိမ့်မည်နည်း
မတ်လ 29, 2007 မှာ 9: 28 AM
အကယ်၍ သင် iTunes default import encodingage - AAC သို့ပြောင်းသည်ဆိုပါက။
မတ်လ 29, 2007 မှာ 9: 30 AM
ငါ mp3 ကူးပြောင်းခြင်းပြmp3နာ mpXNUMX မှအခွင့်အရေးများနှင့်ဆက်စပ်သောပိုရှိသည်ထင်ပါတယ်။ ငါ coding လက်လီဆော့ဖ်ဝဲထဲကထားသင့်ကြောင်းတစ်နေရာရာကိုဖတ်ပုံရသည်။ ငါအဲဒါတိကျတယ်လို့ထင်တယ် ငါအမှားလုပ်မိရင်ငါ့ကိုပြင်ပေးပါ
မတ်လ 29, 2007 မှာ 11: 56 pm တွင်
ထိုလမ်းကြောင်းကိုထပ်မံ နှိပ်၍“ Show in Finder” ကိုရွေးချယ်ပါ။
မတ်လ 30, 2007 မှာ 6: 40 AM
Tibor, iTunes newby, ပြောပြပါလား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ထိုအဟုတ်, ငါစိတ်ပျက်ခြင်းနှင့်ငတ်မွတ်ဖြစ်ခြင်း ... OSX ၏အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအတော်လေးစမတ်ဖြစ်ပါတယ်။ (သို့သော် MP3 သို့ပြောင်းခြင်းသည်မဟုတ်ပါ။ )
မတ်လ 31, 2007 မှာ 7: 36 pm တွင်
Doug: များသောအားဖြင့်ပိုလို့လွယ်တယ်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်မှာ iTunes (နှင့် iPhoto) ကိစ္စရပ်အချို့ကိုကိုင်တွယ်ပုံသည်ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။
မတ်လ 31, 2007 မှာ 6: 48 pm တွင်
... နှင့် Googling သောအခါ, smart ကိုးကားအသုံးပြုခြင်းအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်:
osx“ aiff to mp3”
မတ်လ 31, 2007 မှာ 6: 43 pm တွင်
.aiff ကအသံကိုမချုံ့ဘူး။ သင်သည်အသံနှင့်ကျွမ်းကျင်စွာအလုပ်လုပ်ပါက (အကောင်းဆုံးသော Mac အသုံးပြုသူများနည်းတူဂရပ်ဖစ်နှင့်ဗွီဒီယိုပြီးနောက်၊ အသံတည်းဖြတ်ခြင်းသည် Mac များအတွက်တတိယမြောက်အများဆုံးအသုံးပြုသော app ဖြစ်သည်) ။
ဒါပေမယ့် QT က MP3 ပြောင်းလို့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်အံ့သြမိပါတယ်။
အကယ်၍ အသံဖိုင်များကိုပုံမှန်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဒေါ်လာ ၁၀ အက်ပ်ကိုအကြံပြုနိုင်သည် အသံ Converter.
Mac ဆော့ဗ်ဝဲကိုရှာဖွေတဲ့အခါ၊ ငါအကြံပြုလိမ့်မယ် Mac Update Google ကိုကျော်။
ဧပြီ 1, 2007 မှာ 10: 22 pm တွင်
များစွာသောအရာကငါ့ကို macs အကြောင်းအခွံမာမောင်း။ ငါနှစ် ဦး စလုံးစနစ်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသုံးပြီးနှင့်ငါဒီ statemnts လုပ်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီစဉ်းစားပါ။ “ Expand” ၀ င်းဒိုးခလုတ်သည် ၀ င်းဒိုးကိုဖြစ်စေသည့်အခါကျွန်ုပ်အနည်းငယ်စိတ်ပူသည်။ ဒါ့အပြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ heck က window frame ရဲ့ဘယ်အစွန်းကိုမဆိုဆွဲယူလို့မရဘူးလား။ ပြီးတော့ delete key ကဘာကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ delete key လိုအလုပ်လုပ်ရတာလဲ။
တစ်ခါတုန်းကဝါရင့်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်က G3 ကိုပိတ်လိုက်တာကိုကြည့်လိုက်ရင် power button က cd eject ခလုတ်နဲ့တူတယ်။ အလိုလိုသိဒီဇိုင်း? မဖြစ်နိုင်ဘူး
ငါ and အပေါ်နှင့်သွားနိုင်ပါတယ်